Vonona hiverina tany Pakistan ny praiminisitra teo aloha Nawaz Sharif sy ny zananivavy hampakatra ny raharaham-pitsarana iampangana kolikoly azy ireo · Global Voices teny Malagasy
Vonona hiverina tany Pakistan ny praiminisitra teo aloha Nawaz Sharif sy ny zananivavy hampakatra ny raharaham-pitsarana iampangana kolikoly azy ireo
MpanoratraAnushe Noor Faheem.
Voadika ny 17 Jolay 2018 5:42 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Swahili, Ελληνικά, English
Ny praiminisitra teo aloha Pakistan Mian Muhammad Nawaz Sharif tao amin'ny Firenena Mikambana, 27 Septambra 2015. Sary avy amin'ny Flickr avy amin'ny Vehivavin'ny Firenena Mikambana. CC: BY-NC-ND 2.0
Vonona hiverina any Pakistan avy any amin'ny Fanjakana Mitambatra (UK) ny praiminisitra pakistaney teo aloha Mian Muhammad Nawaz Sharif taorian'ny didim-pitsarana Pakistaney nanameloka azy higadra folo taona an-tranomaizina noho ny fananany tamin'ny fomba tsy ara-dalàna ireo trano sy fananana hafa miorina ao U.K.
Nanambara tao Londra, Angletera ny zanakavavin'i Sharif Maryam Nawaz fa hiverina any Islamabad, Pakistan amin'ny 13 jolay 2018 izy sy ny rainy, herinandro vitsy monja mialoha ny fifidianana ankapobeny ao Pakistana amin'ny 25 Jolay. Mikasa hampiakatra ny raharaha vokatry ny didim-pitsarana momba ny kolikoly nambara tamin'ny Zoma 6 Jolay any amin'ny fitsarana ambony izy ireo.
Tany Londra i Sharif sy ny zanany vavy mba hitsabo an'i Kulsoom Nawaz, vadin'i Sharif, izay manaraka fitsaboana homamiadana amin'izao fotoana izao ary ao anatin'ny tsy fahatsiarovan-tena (komà).
Amin'ny tranga iray antsoina hoe Didim-pitsarana momba ny Avenfield notsaraina teo ambanin'ny sampana miady amin'ny kolikoly Biraom-pirenena ho an'ny Fandraisana Andraikitra, voampanga ho nividy trano tany Londra tamin'ny alalan'ny famindràna vola avy any Pakistana tamin'ny fomba tsy ara-dalàna i Sharif. Voasazy higadra 11 taona an-tranomaizina miaraka amin'ny onitra 8 tapitrisa Livra Britanika, GBP (1,3 lavitrisa Ropia Pakistana, PKR) izy.
Voasazy higadra valo taona an-tranomaizina miaraka amin'ny onitra 2 tapitrisa GBP (335 tapitrisa PKR) ny zanany vavy Maryam. Fanampin'izany, nahazo sazy herintaona an-tranomaizina ny kapiteny (Rtd) vadiny Safdar.
Nitolo-batana tao amin'ny Biraom-pirenena misahana ny Mangarahara (tamberin'andraikitra) ao Islamabad i Safdar tamin'ny 9 Jolay:
Nosamborina tany Rawalpindi ihany ny kapiteny Safdar raha miantso famoriam-bahoaka ao Haripur kosa i Imran Khan mba hampitandrina an'i Nawaz Sharif fa tsy tokony hiseho ho Nelson Mandela izy. Tapa-kevitra hiverina hiatrika fisamborana i Nawaz Sharif & @MaryamNSharif. Rahona ratsy no manalokaloka ity fifidianana ity.
Nilaza ilay mpanao gazety Mohammad Taqi fa fomba iray ho an'ny Fitsarana Tampony ao Pakistana mba “hampitombo ny raharaha hanenjehana azy” ny raharaha Sharif amin'ny fampifandraisana ny didim-pitsarana amin'ny raharaha mahatafintohina Panama Papers, izay “voatonona tamin'ny vaovao tafaporitsaka ny zanany “. Manazava i Taqi:
Vintana tsara ho an'ny tafika ny tranga ankehitriny nampian'ny fivoahan'ny raharaha antsoina hoe Panama Papers. Voatonona tao anatin'ny vaovao tafaporitsaka ho mitàna orinasa off-shores mba hitantana ny fandraharahan'izy ireo sy ny fananan'izy ireo ny zanaky ny praiminisitra teo aloha, saingy tsy voatonona kosa izy tenany. Nivadika ho fitsarana ambaratonga voalohany ny Fitsarana Tampony ao Pakistana (SCP), izay nanajanona ny fizotry ny raharaham-pitsarana araka ny tokony ho izy ary naka ny Papama Papers hanoherana an'i Sharif.
Na dia teo aza ny fihazana azy mahery vaika, dia tsy nahita porofo tamin'ny fandikàn-dalàna ny SCP fa namantsika an'i Sharif tamin'ny fiampangana kely ho tsy nanambara ny mety ho fidiram-bola. Na izany aza, ny zavatra nataon'ny SCP – izay azo antoka fa manao hetsika amin'ny fitarihan'ny tafika – dia ny hampitombo ny raharaham-pitsarana hanenjehana an'i Sharif. Herintaona lasa izay, nanambara ny SCP fa meloka noho ny tsy fahamarinana izy ka noho izany, tsy afaka manao asam-panjakana.
Taorian'ny didim-pitsaran'ny Fitsarana Tampony tamin'ny Jolay 2017, voatery nandao ny biraon'ny praiminisitra i Sharif. Tsy navela hirotsaka hofidiana amin'ny fifidianana ankapobeny amin'ny volana jolay 2018 i Maryam sy Safdar.
Tehaka sy tsikera ho an'ny didim-pitsarana?
Maro no mahita ny fitsaràna vao haingana sy ny didim-pitsarana ho an'ny fianakavian'i Sharif ho toy ny hetsika ara-politika mba hanakanana azy ireo tsy hifaninana amin'ny fifidianana ho avy. Ry Sharifs dia mpikambana ao amin'ny Ligy Miozolomana Pakistana (N) (PML-N) ary maro no manantena an'i Maryam Sharif, zanany vavy hanaraka ny dian-drainy:
Tsy afaka mifaninana amin'ny fifidianana ankapobeny 2018 i .@MaryamNSharif. Voampanga tamin'ny #AvenfieldCase izy ary voaheloka higadra 7 taona an-tranomaizina sady tsy maintsy mandoa onitra 2 tapitrisa livra.
Former president SC Bar Association, Ali Ahmad Kurd says, everyone knows how NS was ousted, and sentenced with @MaryamNSharif the Designers in Establishment must stop playing with the fate of nation, if the election is turned into selection, people won’t accept. @Dawn_News https://t.co/DqzJGvjOt7
Nilaza ny filohan'ny Fikambanana SC Bar teo aloha, Ali Ahmad Kurd fa ny tsirairay dia samy mahafantatra ny fomba nanonganana an'i NS, ary voasazy niaraka tamin'i @MaryamNSharif, tsy maintsy mijanona amin'ny filalaovana ny firenena ny mpametraka izay hitondra ny firenena, raha havadika fifantenana ny fifidianana, dia tsy hanaiky ny vahoaka.
Nisafidy kandidà hisolo an'i Maryam Nawaz amin'ny fifidianana ny PLM-N
Mandritra izany, efatra tamin'ireo trano Avenfield tany Londra no nogiazin'ny governemanta federalin'i Pakistan. Nivory teo ivelan'i Avenfield ho fankasitrahana ny didim-pitsarana ireo mpanohana ny Pakistan Tehreek-e-Insaaf (PTI) antoko politika mpifaninana.
Nisioka ilay mpikatroka media sosialy Hamza Khan hoe:
Fihetsiketsehana eo ivelan'ny Trano #AvenfieldReference
Voalaza fa niezaka hiditra an-keriny tao amin'ny efi-tranon'i Sharif ao Londra ireo mpanohana ny PTI. Mpanao gazety Murtaza Ali Shah nisioka hoe:
— Murtaza Ali Shah (@MurtazaViews) July 8, 2018
Mampiseho ny fikasan'ireo mpikatroka PTI hiditra an-keriny ao amin'ny fidirana ao amin'ny efi-tranon'i Hasan nawaz Sharif ny lahatsary. Nilaza ny loharanom-baovaon'ny polisy metropolitana fa nahazo ny sarin'ireo mpanafika ny polisy ary handray fepetra noho ny fikasana hanafika sy hanimba fananana
Mikasa hisambotra an'i Sharif amin'ny fahatongavany ao amin'ny seranam-piaramanidina ny Biraom-pirenena misahana ny Mangarahara (Tamberina Andraikitra).
Na dia izany aza, nanambara ny fikasan'izy ireo hitsena ny filohan'izy ireo ao Islamabad ireo mpanohana ny PML-N. Ambony dia ambony ny fiarovana. Manohy ny fampielezan-kefi-pifidianany manerana ny firenena ny PML-N.
Nankalazain'ny sasany ho toy ny dingana mankany amin'ny firenena afaka amin'ny kolikoly ny didim-pitsarana. Mpanao politika, Dr, Tahir ul Qadri nisioka hoe:
— Dr Tahir-ul-Qadri (@TahirulQadri) July 7, 2018
Rotsak'orana voalohany ny didim-pitsaran'ny Fitsarana Ehtesab, ary avy ho orambe arahina oram-batravatra. Fivoarana lehibe eo amin'ny ady amin'ny kolikoly ity didim-pitsarana ity, ary tsy maintsy hoentina anaty boky izay nandroba ny firenena ireo mpanao kolikoly tsirairay avy
Mpilalao sarimihetsika sady mpikatroka Hamza Ali Abbassi mahita ny didim-pitsarana ho toy ny fotoana fireharehana ho an'i Pakistan:
Insha Allah, hahatonga antsika hirehareha amin'ny maha Pakistaney ireo lohatenim-baovao ireo atsy ho atsy: Nogadraina noho ny kolikoly ny praiminisitra Pakistaney Nawaz Sharif teo aloha!
Nefa nandrisika ny olona hanohana ny antokony manoloana ny didim-pitsarana ny mpiasa ara-politikan'ny PML-N. Nisioka i Imran Khalid Butt, mpiasan'ny PML-N hoe:
— Imran Khalid Butt (@ImranKButt) July 8, 2018
Famoriam-bahoaka ao UC-30 an'ny #Gujranwala. Nanohana antoko hafa ireo olona ireo saingy nanatevin-daharana ny @pmln_org taorian'ny didim-pitsarana #AvenfieldReference
Kolikoly ao Pakistan
Araka ny voalazan'ny Tondro momba ny Kolikoly navoakan'ny Transparency International (TI), laharana faha-116 amin'ireo firenena176 i Pakistan tamin'ny taona 2016 ary manondro ny taha ambony amin'ny kolikoly ao amin'ny firenena izany.
Ry Sharifs no voalohany voaheloka teo ambanin'ny lalànan'ny tamberina andraikitra (mangarahara) ao Pakistan.
Ny Avenfield Reference dia iray amin'ireo tondro telo momba ny kolikoly nitoriana ny fianakaviana taorian'ny fanamelohana sy ny fanesorana an'i Nawaz Sharif eo amin'ny toerana maha-praiminisitra amin'ny volana Jolay. Mbola misy raharaha roa hafa miandry any amin'ny fitsarana momba ny fandraisana andraikitra (mangarahara) ao Pakistan.
Nantsoina ho any amin'ny fitsarana ihany koa ny filoha Pakistaney teo aloha sady jeneralin'ny tafika, Pervez Musharraf noho ny fiampangana azy ho manao kolikoly.